"Indlela thunga ezizibeni?" - ukubuza? Futhi odinga ukukwazi? Ah, yebo, une umyeni - ezempi. ezinegunya, iyunifomu ironed, imiklomelo akhazimulayo, iphrofayela nesibindi ukuma Amazing ... Awu, kulungile. Ngokuvamile, akekho ukukwenza futhi, okubaluleke kakhulu, akekho owaziyo ukuthi thunga kahle ezizibeni. Lapho kukhona abanye iyunifomu ndaba? Ihhovisi Usigaxamabhande sika, cishe, abeve loafers kanye nezinambuzane.
Kulungile, kubalulekile, ngakho-ke kuyadingeka, thunga. Kube kunjalo imizuzu nje amane noma amahlanu, mhlawumbe uma ucabangisisa baphathe yaseZimbabwe, ngaphandle ngokushesha kungekho isikhathi. Kodwa ngenkathi umyeni wakhe ngenkonzo owufunayo kwi-inthanethi? Cishe akunakwenzeka ukuba uthole ukwaziswa mayelana nendlela asebenzise inaliti. Hhayi-ke elula.
"Indlela ukuthatha iphilisi?" - Kazi, kahle, kuthiwani phambili zilwane? Hlonipha amagama? Angifuni ukuba indodana kumuntu onjalo? Yini? Futhi, lokho-ke, kukhona kakade encane. Futhi kancane ngempela ngonyaka kuze kube manje. Hhayi-ke, ngaleso sikhathi kuyaqondakala ukuthi kungani kudingeka wazi ukuthi kanjani ukuthatha izinto zokuvimbela inzalo amaphilisi. Lapha, ngokuvamile, yonke into ilula - kudokotela-wezifo zabesifazane kudingeka uhambe, ukucacisa isimo. Udokotela uyosingatha ukuhlolwa, luhlolo ukhethe, uma kunesidingo, yebo. Nokho, ngemva ngokuningiliziwe futhi inkulumo mayelana imithi futhi kanjani ukuthatha. izindlela zokuvimbela inzalo amaphilisi zihlukile, uqobo akudingekile ukuba wona empilweni yabo engozini. Lokho uzokweluleka, udokotela uhlakaniphile, yimuphi ongcono, bayoba ngawe uqobo. Ngakho, uma umbuzo ukucacisa ukuthi ukulawula lokuzalwa amaphilisi, sekuyisikhathi ukwenza ibhizinisi, kubalulekile ukuba thunga ezizibeni, kanye umbukiso lempi ngempelasonto esiya kuyo kuyoba. Kanjani umyeni wakho ngaphandle kwabo okuthile. Akukhona umsebenzi omuhle. Akukho sidingo, iziphathimandla azizange ukuqonda, ukuhlonipha abangaphansi ziyophela. Ibhizinisi elikhulu okuthile.
Ngokuvamile, thina uqhubeke. Awuyi ukulungisa ezizibeni ehlombe phezu ihembe? Kunjalo. Ziyakwazi khona hhayi thunga, nje nejazi nezincwadi ingubo. Vula encane lapho umyeni izinkomba kuqoshwe futhi ufunde ngokucophelela lokho akutshela wena. UMnyango ngamunye has iziqondiso zalo siqu kusuka abaphathi abaphezulu: yini okufanele emaphethelweni ezizibeni ihlombe nehlombe, futhi yini - kufinyelele entanyeni. Kutholwe sikahle ngesenzakalo kungenzeki, kodwa rip off futhi kungadingeki ukuba ushintshe. Izinto kufanele yafakwa? Inalidi badinga, ngentambo eqinile awugqinsi, imfimbolo ukuvikela iminwe, nombusi wezwe, ngoba Curves epaulets ukuba yini.
Thunga uqale ngokubheja epaulet isikwele rovnehonko zifana kuya umphetho exhumanisa nangemuva le ngubo. Ngakho ukukwenza, ukuze ncamashi eyodwa isentimitha ukuphishekela lokhu ngokuhlanganyela waphindela emuva. Unqenqema engezansi umphetho emikhonweni Abut rovnenko. Ukuze ezizibeni ehlombe kungukuthi wathutha, kubalulekile ukuba tack ambalwa nantathu yaseZimbabwe yesikhashana. Emhlabeni emaphethelweni epaulet yaseZimbabwe ezincane zize zidlulele ngobukhulu isigamu isentimitha, ukuze abakwazanga ukubona, okungukuthi, uwafihle emngceleni exhumanisa onqenqemeni kanye main endaweni phezulu. Phinda konke on the ingalo yesibili, ngakho kakhulu ngakho-ke kuyadingeka ukuba ngobuhlakani ukuba epaulettes ngokulinganayo enamathiselwe. Lokhu akunzima ke ukuthi umugqa thina singaba usizo kabi.
Nokho, zibabaza umsebenzi wakho umbhalo wekugcina lolungiswe emaphutsa, yeh rovnenko, kungcono zako kungenye indaba. Ngaphandle ehlombe ezizibeni kanye jikelele akuyona jikelele, ngakho generalishko.
Shawarma Eastern: indlela ukupheka?
Unjani umbala esibhakabhakeni? Kungani isibhakabhaka siluhlaza kusukela umbono physics?